Ukushunqisa ukudla kungumkhuba wasendulo; enye yezindlela zokuqala zokupheka nokulondolozwa kokudla okufana nenyama nenhlanzi.
Izicelo zesimanje zokubhema njengokulungiswa kokudla zifaka phakathi ukumasha inyama ngaphambi kokubhema, ukusetshenziswa kwezinhlobo ezahlukene zamapulangwe ezinkuni ukudlulisela ukunambitheka okuhlukile, ukubhema izinto zokudla ezinjengoshizi nemifino nokuthuthukiswa kwentuthu ewuketshezi.
Ungashunqisa Kanjani Ukudla
Ukubhema okushisayo kokudla kwenziwa ngaphezulu komthombo wokushisa okufakwa kuwo ama-chips noma izinkuni zokhuni. Intuthu ka-Liquid nayo ingasetshenziswa.
Ukubhema kubeka ukunambitheka kokudla futhi kunomthelela omncane wokulondolozwa njengoba kubangela ukomiswa kwangaphandle komkhiqizo wokudla. Ukuze ulwisane nomphumela wokubhema owomile, ukudla kuvame ukushiswa noma kushiywe ku-brine osawoti ngaphambi kokuba inqubo yokubhema iqale. Umphumela olondoloziwe wokubhema ungathuthukiswa ngokupheka noma ngosawoti womkhiqizo.
Ukubhema okushisayo kwenziwa kumuntu obhemayo lapho izinga lokushisa lenyuka khona ukuze kuvunyelwe umkhiqizo ophekwe ngokugcwele. Izinzipho noma izinkuni ezenziwe ngamakha, ezifakwe emthonjeni wokushisa, zibangele intuthu ebeka ukunambitheka kokudla. Ukubhema okushisayo kokudla kuyindlela yokupheka eshintshiwe evumela ukubhema kanye nokupheka kwenyama.
Kufanele kulandelwe imithetho embalwa ukuze kuvunyelwe ukuphepha kokudla:
Ukudla okuncishisiwe kuphela okufanele kubheme. Ungabhemi inyama eqandisiwe ngokwengxenye ngoba lokhu kungaholela ekutheni izinga lokushisa langaphakathi lingafinyeleli emazingeni okushisa aphezulu ukuze uchithe noma yiziphi amagciwane ayingozi.
Gcoba njalo noma ukushisa ukudla esiqandisini.
Sebenzisa ama-thermometers ukukala izinga lokushisa lentuthu kanye lokushisa kwenyama.
Inyama nengulube kufanele ifinyelele ekushiseni kwangaphakathi okungenani okungama-62℃, izinhlanzi ezibhemayo ezishisayo kufanele zifinyelele okungenani ku-66℃ futhi izinkukhu kufanele zipheke ziye ekushiseni kokugcina kwangaphakathi okungu-74℃ okungenani.
Ukubhema kunomphumela wokugcina olinganiselwe futhi ukudla okubhemayo kufanele kusingathwe futhi kugcinwe njengawo wonke umkhiqizo ophekelwe.
Phola ngokushesha ngemuva kokubhema - izingcezu ezinkulu zenyama zingadinga ukusikwa zincanyana - futhi ugcine ukudla okubhemayo endaweni efrijini isikhathi esingangezinsuku ezintathu kuya kwezine.
Izinhlanzi ezibhemayo ziqhela phakathi kuka 2 - 5°C.
Uhlobo lwezinkuni izinkuni ezisetshenziselwa ukubhema ukudla luyonquma amandla nokunambitheka kwephrofayili yentuthu. Izinkuni ezivela ezihlahleni zezithelo - eliphakathi kwe-apula, i-apula, i-peach noma i-cherry izinkuni zinikeza ukunambitheka okumnandi futhi zithandwa ukusetshenziswa ngenkukhu nezinhlanzi.
Inyama enjengengulube nomdlalo ukhiqiza ukunambitheka okungacatshangwa uma kubhema nge-hickory, imephu, ipecan ne-oak izinkuni chips. Kwesinye isikhathi izitshalo ezinjenge-rosemary noma ngisho ne-rooibos ziyangezwa ukunikeza ukunambitheka okwenziwe ngamakhambi ngaphezulu.
Thenga izinkuni kubathengisi abadumile.
Ungalokothi usebenzise ukhuni opendiwe nopendiwe njengopayini, umphini wamsipha noma umsedari. Izinkuni ezinobuthi zifaka i-tamboti ne-oleander. Izinkuni ezivela ezivandeni zezithelo zingaqukatha amakhemikhali asele.
Ukubhema okubandayo kokudla kubandakanya ukubhema komkhiqizo ngaphandle kokuwupheka. Umkhiqizo uvame ukubekwa uphawu ngaphambi kokubhema njengoba i-brining izoba nomphumela ongcono wokulondolozwa kunokubhema okungaphansi komusi.
Ukubhema okubandayo kuvame inqubo eyenwebekile (kusuka emahoreni ayi-6 kuye kwangama-24 ngenhlanzi) okushisa okuphakathi kwama-30℃.
Ukubhema okubandayo kufanelekile ushizi kodwa futhi kusetshenziselwa ukubhema inhlanzi nokufaka ukunambitheka okubhemayo kumantongomane, ugalikhi, i-olive, amaqanda, i-tofu kanye nemifino.
Intuthu ka-Liquid ingubomvu koketshezi ophuzi olunamanzi ophuzi owenziwe nge-insensate yentuthu. Ukudla kungacwilisa ngamakhambi noma kushiywe ukuze kufakwe emabhulekisini aqukethe intuthu yoketshezi. Intuthu ka-Liquid nayo ingangezwa kuma-cheesy dips, o-oyili nososo. Ama-gourmand angama-adventurous nawo awusebenzisa kuma-cocktails nase-dessert lapho ukunambitheka okubabayo kumamatheka kahle nge-caramel noshokolethi omnyama.
Izinzuzo ezimbili zentuthu yewuketshezi ukuthi ukunambitheka kwentuthu kungalawulwa ngqo futhi ukunambitheka ngokushesha.
Imikhiqizo Yokudla Eshunqelwe
Ukudla okuthandwa ukushunqelwa kufaka izimbambo, inyama yenkomo ebunjiwe, ubhekeni, i-pastrami, iKassler, i-gammon kanye ne-hams efana ne-Eisbein ne-Black Forest ham.
Izibonelo zemoseji ebhemayo zingama-bockwurst, ama-chorizo, ama-cabanossi, amasalami kanye ne-sausage ngenkathi kubheme izinhlanzi ezinjenge-smoned trout, i-salmon, i-cod, i-herring, i-eel, i-haddock, i-catfish kanye ne-sardines.
Okunye ukudla okubhemayo njengoshizi, amantongomane, uwoyela onambithekile obhemayo nemifino ebhemayo kanye neyosiwe njengombila we-corn-on-cob namazambane nakho kuthandwa kakhulu.